रूस, 20 औं शताब्दीको इतिहास - हाम्रो समकालीनहरूको आँखा मार्फत मुख्य घटनाहरू
कति विगतमा हाम्रो तथाकथित "इतिहासकारहरूले", "शैक्षिक" आविष्कार अकादमियों, "विशेषज्ञहरु" क्षेत्रहरु को एक किसिम मा (अक्सर टाढा वास्तविक इतिहासबाट) लेख्न पुस्तकहरू, चलचित्रहरू बनाउन र प्रसारण विवादहरु, जहाँ अचम्मको दृढता साथ instigate , मुख मा फोमिंग, हाम्रा पुर्खाहरूले बस्ने कसरी खराब र गलत बारे हामीलाई भन्नुहोस्। यी अर्को सार्वजनिक सम्बन्ध अभियान भन्दा कुनै थप "Clio सेवकहरू" को लागि 20 औं शताब्दीमा रूस को इतिहास मात्र आफ्नो कल्पनामा लागि पैसा प्राप्त उद्देश्य देखिन्छ।
तर, यो 20 औं शताब्दीमा शायद सबैभन्दा रूसी अवधिको लागि भरिएको थियो। पछि 1905 को क्रांति, को अक्टोबर क्रान्ति, सबै को कार्डिनल परिवर्तन soveshila जो ऐतिहासिक प्रक्रिया। सम्राट को रूसीहरूले बदलिएको थियो, बिजुली साधारण मान्छे को हातमा पारित गरेको छ। लाभ वा हानि - आज यदि यो आवश्यक थियो, यो क्रान्तिको बनाउन अनुकूल थियो जसले विषय, र के ल्याएको छ थप एक जोर तर्क छ।
पछिल्लो रूसी tsar को समकालीन पहिचान गर्न अस्पष्ट मनोवृत्ति। इतिहासकारहरूले दुई विरोध शिविरमा विभाजित छन्। एक हात मा, हाम्रो समकालीनहरूको को राजतन्त्र र रूस को पतन के भयो लागि पूर्ण जिम्मेवारी उहाँलाई दिनु। प्रवृत्ति बुझ्न यसको विफलता मा राज्य मा स्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्नुको र देशमा तनाव को buildup रोक्न सक्छ कि परिवर्तनहरू लागू गर्न समय चाहिन्छ: यो निकोलस द्वितीय, सबै पाप को आरोप थियो। कि, यी साधारण प्रतिनिधित्व अनुसार, यो सम्राट को सिंहासनमा हाम्रो देश को इतिहास मा गाह्रो, महत्वपूर्ण क्षण समयमा अयोग्य थियो निष्कर्षमा सकिन्छ छ, reactionary प्रभाव गर्न व्यक्ति विषय, कमजोर-इरादों, तिनीहरू प्रतिबिम्बित।
को इतिहासकारहरूले अर्को भाग, अर्कोतर्फ, पछिल्लो सम्राट, उत्कृष्ट आकार यसको गुणहरू उच्च पार्नमा देखाएको admires। रूसी इतिहासकारहरूले Bokhanov ए र एम Gorinov धेरै पुस्तक यी सबै मुद्दाहरू मा नजर विस्तृत। तिनीहरू सबै धर्काहरू को शोधकर्ताओं को दृश्यहरु एक किसिम ल्याउन।
र पक्कै पनि विवाद को सबैभन्दा ठूलो संख्या र उत्तरार्द्ध-दिन "शैक्षिक" बाट सबैभन्दा भयानक पुकारा कारण, समाजवाद को अवधिमा सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्तित्व यूसुफ Vissarionovich Dzhugashvili (stalin) को व्यक्तित्व छ। साँच्चै, रूस, 20 औं शताब्दीमा, सम्पूर्ण इतिहास यो व्यक्ति को सक्रिय सहभागिता निर्माण। यसलाई जसले थियो "को हलो गर्न देश लिए र एक आणविक बम संग बाँकी," उहाँले यो ऐतिहासिक अवधिमा सबैभन्दा लामो-सेवा नियम थियो, यो उहाँलाई छ र महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध आफ्नो नेतृत्वको अन्तर्गत जित्यो थियो।
फलस्वरूप नरसंहार के मात्र छैन लाखौं मानिसहरू दसौं को राज्यपाल आरोप छ गोली, मृत्यु औद्योगीकरण र collectivization, युद्ध को प्रकोप। यी मिथक एक vehemently stalin को विरोधीहरूले समर्थित, उहाँले जर्मनी, एडल्फ हिटलर पावर ल्याइएको थियो के कथा छ। किनभने त्यहाँ रूस, को बीसौँ शताब्दीको मात्र होइन इतिहास, तर पनि सामान्य मा विश्व इतिहासको पाठ्यक्रम मुछिनुभएको छ हामीलाई, यो मुद्दा मा एक सानो बिट बुझ्न प्रयास गरौं।
"कसले5वर्ष मा कुनै पनि मानिस मा व्यवहार कसरी ठीक भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ?": का एक सानो प्रश्न सुरु गरौँ: "तपाईं 10 वर्ष मा के हुनेछ ठ्याक्कै थाह छ?" अथवा हामी अलि फरक प्रश्न तैयार गर्न सक्नुहुन्छ। म को सहभागी कुनै पनि "psychics युद्ध," संसारको सबै भन्दा राम्रो संस्थाहरू लागि विश्लेषकहरूले तपाईं यथार्थ जवाफ दिन सक्ने छैनन् कि निरपेक्ष विश्वास छ। र केवल एक व्यक्ति, शताब्दीयौंको पुरानो लागि मानवता को इतिहास, कथित "इतिहासकारहरूले", यो के गर्न सक्छ - Iosif stalin। उनलाई, ठूलो र शक्तिशाली, रूस, 20 औं शताब्दीको इतिहास द्वारा भविष्यवाणी थियो।
यो पनि बीसौँ शताब्दीको 39-40 वर्ष मा, एडल्फ हिटलर संसार युद्ध unleash भनेर थाह सोभियत संघ को सेना नेतृत्व गर्न, Slavs र यहूदीहरूको एउटा नरसंहार, मंचन जसले, (रोक्न वा छैन) 1933 मा जर्मनी मा शक्ति आउन भनेर गरौं थियो। तपाईं यस्तो जादू मा विश्वास गर्नुहुन्छ? सायद, यो क्षण मा, र यो सम्भव अन्तरदृष्टि को मान्छे को रहस्यमय नेता को मिथक debunking रहन थियो। तर तपाईं रूस, 20 औं शताब्दीको इतिहास, छेउमा एउटा सानो बिट हुनेछ यद्यपि, केही तथ्य थप्न सक्नुहुन्छ, र 20 औं शताब्दीको जर्मन इतिहासको मात्र एउटा सानो पृष्ठ disclosed गरिनेछ।
आधुनिक "इतिहासकारहरूले" अगाडि stalin अनुमति थियो भने जर्मनी को कम्युनिष्ट पार्टी मतदान गर्न कि अभिधारणा संग सँगै राख्न सत्यको रक्षा मा, आधारभूत थियोसिस सामाजिक लोकतान्त्रिक जर्मनी को पार्टी, तिनीहरूले वोट को 50% भन्दा प्राप्त हुनेछ र हिटलर शक्ति छैन आउन छन्।
साथै, हाम्रो "शैक्षिक" छैन एसपीडी शहर पनि आफ्नो उम्मेदवार नियुक्त गर्नु प्रयासहरू बनाउन थिएन 1932 चुनाव मा जर्मन आफूलाई को राय रुचि र वास्तवमा छन्! किन? किन यो पार्टी पनि KKE एउटा सम्बन्ध, जो मत को 13 15% देखि विभिन्न अनुमान अनुसार थियो प्रवेश छैन गर्नुभयो? वोट को 53% बढाउनका अनुमति दिने, Hindenburg - त्यसको विपरीत, त्यो पनि हिटलर एक वास्तविक प्रतिस्पर्धा बनाउन सक्ने मात्र व्यक्ति समर्थित। यो जनवरी 1933 मा मार्च संसदीय चुनाव सरकार जर्मनी मा राष्ट्रिय मोर्चा को टाउको गठन र बन्न हिटलर अनुमति अघि राष्ट्रपति Hindenburg थियो। 1933 मा चुनाव कारण (हिटलर द्वारा लाग्यौं) को NSDAP को मत को जित्यो 44%, को KKE - 12.3%, को एसपीडी - 18.3%। हाम्रो "इतिहासकारहरूले" को इतिहास संग गणित परिचित र अपरिचित जो कोहीले 31 44 भन्दा कम छ भनेर भन्न थियो।
समय फर्किन सक्दैन। तपाईं विगतमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर पनि रूस को इतिहास, 20 औं शताब्दीमा केही तथ्याङ्कले आज मात्र उनको आफ्नो नाम बनाउन गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन।
रूसी साम्राज्य र पदक को अर्डर
Voroshilov देखि Yazov गर्न सोभियत संघ को Marshals,
जर्मन अधिकारी Theodor Eicke: तस्बिर संग जीवनी
Aphrodite, प्रेम को देवी को प्रिय
ओलम्पिक खेल को छल्ले मतलब कि? ओलम्पिक खेल को प्रतीक - छल्ले। ओलम्पिक प्रतीक - घन्टी
आत्म-केन्द्रितता: यो के हो?
अमेरिकी वस्त्र आकार - गुमाए कसरी प्राप्त गर्ने?
"मित्सुबिशी Pajero 2": विशेषताहरू, समीक्षा, फोटो
फूल सुनगाभा को मूल्य - प्रेम र आवेग को प्रतीक
Portofino, इटाली को कुलीन शहर
बहुभाषीमा कप्लेट तयार गर्नुहोस् "पोलारिस"
बाल बाहिर गिर र धेरै पातलो बन्न: कारणहरू